Ho fitaovana ampiasain’Andriamanitra
"Koa inona moa Apolosy, ary inona moa Paoly? Mpanompo ihany izay nahatonga anareo ho mpino ireo, dia samy araka ny nomen'ny Tompo azy avy? " - 1 kôr. 3:5.
Tsy manana fanomezam-pahasoavana mitovy ny mpanompon'Andriamanitra, kanefa samy mpiasany ireo. Tsy maintsy mianatra amin'ilay Mpampianatra Lehibe ny tsirairay, avy eo dia mampita izay nianarany avy taminy. Tsy manao asa mitovy izy rehetra, kanefa samy fitaovana ampiasain'Andriamanitra avokoa, eo ambanin'ny hery manamasina avy amin'ny Fanahy Masina. Mampiasa fanomezam-pahasoavana samy hafa eo amin'ny asany Andriamanitra ho famaboana fanahy avy amin'ny tafik'i Satana.
"Ary iray ihany ny mpamboly sy ny mpandena, nefa samy handray izay valim-pitiany avy araka ny fisasarany izy. " - 1 Kôr. 3:8. Andriamanitra, fa tsy olombelona, no mpitsara ny asan'ny olona, ary Izy koa no hitsinjara ny valisoa sahaza ny tsirairay. Tsy nisy nomena zo hitsara ireo mpanompo samihafan'Andriamanitra ny olombelona. Ny Tompo irery ihany no mpitsara sy mpamaly soa ny asa tsara tsirairay. "Iray ihany ny mpamboly sy ny mpandena," manolo-tena ho amin'ny asa iray - dia ny famonjem-panahy. "Fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay; ary sahan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra hianareo" - 1 kôr. 3:9. Oharina amin'ny saha ambolena ny fiangonana ao amin'ireo teny ireo, ka tsy maintsy miasa ao ny mpiasa rehetra, mikolokolo ny voaloboky ny sahan'ny Tompo. Oharina amin'ny trano ihany koa izy, izay ho tonga tempoly masina ho an'ny Tompo. Jesôsy no Lehiben'ny mpiasa. Tsy maintsy miasa eo ambany fifehezany ny rehetra, ka mamela Azy hiasa ho an'ny mpiasa sy amin'ny alalan'ny mpiasa tsirairay. Omeny fahaizana mifandray sy fahalalana manokana ireo, ary rehefa manaraka tsara ny torolalana omeny ireo, dia hampahomby ny asan'izy ireo Izy.
Tsy misy tokony hanameloka an'Andriamanitra izay nanome ny olona tsirairay ny asa tandrify azy. Ny olona izay sosotra sy mimonomonona, izay miasa araka ny fombany manokana, izay maniry ny hanefy ireo mpiara-miasa aminy mba hanaraka ny heviny manokana, dia mila ny fikasihan'Andriamanitra alohan'ny hahamendrika azy hiasa amin'ny laharam-panompoana iray. Raha toa ka tsy miova izy, dia azo antoka fa hosimbany ny asa.
Tadidio fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra isika. Andriamanitra no Ilay mpanetsika tena mahery sy mahomby indrindra. Ny mpanompony kosa no fitaovam-piasany. — RH, 11 Des. 1900.